ताराखोला होमस्टेको पहिलो रोजाइ कोदोको ढिँडो — Arthatantra.com
Arthatantra.com > पर्यटन > ताराखोला होमस्टेको पहिलो रोजाइ कोदोको ढिँडो
बागलुङ । ताराखोला गाउँपालिकाले घरवास पर्यटनलाई बढावा दिएको छ । विसं २०७७ लाई ‘भ्रमण वर्ष’ घोषणा गरेको गाउँपालिकाले यही वर्ष गाउँपालिकाभित्र चार घरवास (होमस्टे) सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
दुई घरवासमा गाउँपालिकाको आफ्नै लगानी छ ।
गत आवमा घरवास सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले रु १० लाख बजेट छुट्याएको थियो । विनियोजित रकमले वडा नं २ अर्गलमा ‘किकल्टा घरवास’ र वडा नं ५ ठूलोहिलेमा ‘हिले घरवास’ शुरुआत भएको थियो । अर्गलमा सात घर र ठूलो हिलेका पाँच घरमा घरवास सेवा छ ।
यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा वडा नं ४ छम्टुमा ‘ताराखोला बहुउद्देश्यीय सामुदायिक रेम्बो ट्राउट घरवास’ र वडा नं ५ मा ‘सीप सामुदायिक घरवास’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । दुवै घरवासका लागि प्रदेश सरकारले रु १० लाखका दरले अनुदान दिएको थियो । गाउँपापालिकाको लगानीमा खुलेका दुई घरवासका लागि समेत यो वर्ष प्रदेश सरकारबाट अनुदान ल्याउन पहल भइरहेको छ ।
‘गत वर्ष दुवै होमस्टेलाई पाँचरपाँच लाख अनुदान दियौँ, यो वर्ष स्तरोन्नतिका लागि केही बजेट छ’, गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीमगरले भन्नुभयो । गाउँपालिकाले सिकाइ र अनुभव आदानप्रदानका लागि अघिल्लो महिना घरवास सञ्चालकलाई अध्ययन भ्रमणसमेत गराएको थियो ।
उनका अनुसार ‘किकल्टा’ घरवासमा आउने पाहुनारपर्यटकले स्थानीय खानाका परिकारसँगै र पारिवारिक बसाइँको आनन्द लिन्छन् । ‘कोदोको ढिँडो, मकै, आलु, स्थानीय कुखुराको मासु बढी रुचाउनुहुन्छ’, घरवास सञ्चालक घर्तीमगरले भने । सादा खानाको रु १७० र मासुको रु १५० मूल्य तोकिएको छ । यस्तै बास बसेको रु २५० लाग्छ ।
पेय पदार्थ र अन्य परिकार खाँदा छुट्टै पैसा तिर्नुपर्छ । यस्तै वडा नं ४ छम्टुमा सञ्चालित सामुदायिक घरवासमा २२ जना पाहुना राख्ने क्षमता छ । ‘होमस्टेमा ट्राउट माछासहित स्थानीय खानाका परिकार खुवाउँछौँ’, घरवास सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पदम खत्रीले भने।
उनले भ्रमण वर्षमा बढीभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटकलाई ताराखोला भित्र्याउने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे । पर्यटन प्रवद्र्धन तथा भ्रमण वर्ष सफल पार्न गाउँपालिकाले चालू आवमा रु ७० लाख बजेट छुट्याइएको थियो । उक्त बजेट पर्यटनमैत्री पूर्वाधार निर्माण र प्रचारप्रसारमा खर्च गरिने छ । सडक स्तरीकरण, सरसफाइ, कला, संस्कृतिको संरक्षण, घरवासको स्तरीकरणलगायतका काम भइरहेको छ ।
पर्यटकीय सम्भावनायुक्त भएर पनि पूर्वाधार र प्रचारप्रसार अभावले ताराखोला ओझेलमा छ । व्यवस्थित सडक, पर्यटकीय पूर्वाधार र गन्तव्यस्थलको पहिचान गर्न सके ताराखोलाले पर्यटनमा फड्को मार्ने देखिन्छ । ताराखोलामा पर्यटक भित्र्याउन घरवास कार्यक्रमले टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । घरवासले अन्य गन्तव्यस्थलको समेत उजागर हुनेछ । स्थानीय उत्पादनका हिसाबले पनि ताराखोला परिचित छ ।
यहाँको मुख्य उत्पादन आलु र भाँगो हो । यस्तै गाईघाटको झरना, डुडेलेलगायत दर्जनौँ पर्यटकीय गन्तव्यस्थल यहीँ पर्छन् । ऐतिहासिक भुस पोल्ने, सिस्नो खोस्ने पर्व, असारे मेलाजस्ता मौलिक संस्कृति र परम्परा ताराखोलामा जीवित छन् । बागलुङ सदरमुकामदेखि ५० किमी मोटरयात्रामा ताराखोला पुगिन्छ । (रामबहादुर थापा/रासस)
२०७६ माघ १२ गते ०४:४० मा प्रकाशित
के हो कोरोना भाइरस ? यसरी बच्न सकिन्छ
सोमबार सार्वजनिक बिदा (सूचनासहित)
सेयर किन्दा करिब डेढ अर्बको छल, महालेखाले पैसा उठाउन दियो निर्देशन !
१० अर्बको रिभर्स रिपोमा साँढे २८ अर्ब रुपैयाँको आबेदन !